China 40Khz Ultrasonic Nano raygba Ngwa Ngwaọrụ na Nnọchi Nnukwu Ochie Omenala Usoro Mmiri Spgba -gha na andlọ Ọrụ |lọ Ọrụ | Qianrong
40Khz Ultrasonic Nano Spray Device with High Frequency Replacement Traditional Abụọ-mmiri Spraying
40K ultrasonic nano spraying bụ teknụzụ spraying pụrụ iche, nke bụ usoro spraying dabere na teknụzụ ultrasonic atomizing nozulu. Tụnyere ọdịnala pneumatic abụọ mmiri spraying, ultrasonic atomized spraying nwere ike nweta mma n'otu, thinner mkpuchi ọkpụrụkpụ na elu nkenke. N'otu oge ahụ, n'ihi na enwere ike ịgbanye ihe ntanye ultrasonic na-enweghị enyemaka nke nrụgide ikuku, iji ultrasonic spraying nwere ike belata mgbanye agba n'oge agba spraying, ma ghọta nzube nke ịchekwa agba. Ntinye ihe ntinye nke ultrasonic spraying bụ ihe karịrị 4 ugboro nke nke omenala na-agba mmiri mmiri.
Ultrasonic nozzles na-arụ ọrụ site n'ịtụgharị ụda ụda olu dị elu na-arụ ọrụ ike, a na-ebufe ikike igwe na mmiri mmiri iji mepụta ebili mmiri. A na-ewebata mmiri mmiri ahụ na atomization site n'ọnụ ya. Mgbe mmiri mmiri na-ahapụ atomization elu nke onu mmiri, ọ na-agbajikwa n'ime ezi alụlụ nke edo micron ụmụ irighiri mmiri, si otú ọbọ atomization.
A na-eji akwa atom na-arụ ọrụ nke ultrasonic atomized alloy na ọla ndị ọzọ nwere ikike, nke na-enye ya nguzogide kemịkal magburu onwe ya na ihe ndị magburu onwe ha. Igwe electroactive dị n'ime ụlọ a kara akara nke na-echebe akụkụ nozulu site na mmetọ mpụga.
Nke gara aga: Ultrasonic Metal Powder Atomization Technology nke Tin Powder Site High Frequency Ultra
Osote: Ultrasonic transducer impedance analyzer Atụle Instrument maka oke
60Khz 150W Ultrasonic ịgbado ọkụ Transducer maka Co ...
20Khz Ultrasonic ahaziri ịgbado ọkụ Horn na A ...
High Frequency ọma jijiji Ultrasonic tingcha Mac ...